Banyere Anyị - Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd.
Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. bụ onye na-ebupu igwe eletriki eletrik dị afọ 10, gụnyere mmepe na mmepụta, nke hiwere na Tianjin, China. Ugbu a, anyị na -eburu Tianjin PILOT FREE TRADE ZONE n'okpuru ubu amụma ọdịmma mba na uru ala pụrụ iche. Na mgbakwunye, ahịrị mmepụta anyị na nchekwa anyị dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Tianjin-Binhai, nke dị mfe maka ibugharị. Maka ngwaahịa anyị: anyị jidere eziokwu a ka anyị nwee obi ike na anyị nwere ike rụpụta ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya na ahụmịhe ụlọ ọrụ afọ iri. Maka teknụzụ anyị: anyị nwere ndị otu R&D nọọrọ onwe ha na -enye OEM na ODM. Na maka ọrụ anyị: anyị mere nkọwa niile iji gboo mkpa ndị ahịa anyị. Ka ọ dị ugbu a, anyị akwagala ngwaahịa anyị na mba na mpaghara iri abụọ dịka Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Turkey, Indonesia, na mpaghara Middle East. Agbanyeghị, anyị anaghị akwụsị n'ụzọ nke "Ọpụpụ". Site na iguzosi ike n'ezi ihe na mmeri mmeri n'ahịrị, anyị na-atụ anya ịkwado ndị enyi ụlọ niile na ndị mba ọzọ na imekọ ihe ọnụ.
Akụkụ azụmahịa: azụmaahịa mba ofesi; azụmahịa mbubata na mbupụ nke ihe na-akwado onwe ya na ngwongwo na teknụzụ; ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, ngwaahịa ịnweta, ngwaahịa ọla, uwe, akpụkpọ ụkwụ na okpu, akụrụngwa na ngwa eletriki, ọrụ aka, nchara, ngwaahịa akpụkpọ anụ, ngwaahịa osisi, arịa ụlọ, ngwaahịa kemịkalụ (ewezuga kemịkal dị ize ndụ), ngwaahịa plastik, osisi, ịnyịnya ígwè na akụkụ, ụgbọ ala , ngwa ọgba tum tum, ihe ụlọ, ceramik Ahịa ngwaahịa poselin
Site 2021, anyị Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. e guzobere afọ 22. Mgbe afọ 22 nke ọzụzụ na mgba, ugbu a ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -ejikọ R&D, imewe na mmepụta. Ka m webata mgbanwe ndị mere na ụlọ ọrụ anyị n'ime afọ 22 gara aga.
Ahịrị Mgbakọ Izugbe nke Mbụ
Na 1999, anyị webatara ahịrị mgbakọ izizi sitere na Germany, na mbido, anyị nwere naanị otu ọgbakọ na -erughị ndị ọrụ iri.
Chepụta ma zụlite okirikiri igwe anyị
N'afọ 2000, anyị bidoro chepụta ma rụpụta okirikiri osisi anyị. Nke a bụ nnukwu mgbanwe. Anyị anaghịzi emepụta ngwongwo ọha. Anyị nwekwara atụmatụ nke anyị ma tinye akwụkwọ ikike maka imewe nke anyị.
E guzobere ụlọ nyocha ụlọ ọrụ mmiri n'oge ụlọ ọrụ anyị.
Na 2001, e guzobere ụlọ nyocha arụmọrụ mmiri na ụlọ ọrụ anyị. N'otu afọ ahụ, a malitere imepụta igwe kwụ otu ebe nwere ihe na -awụ akpata oyi n'ahụ. Kemgbe ahụ, anyị abanyela n'ahịa igwe kwụ otu ebe ugwu dị elu, yana ngwaahịa ndị ọzọ dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche.
Anyị malitere iji teknụzụ ịgbado ọkụ akpaaka ọhụrụ
Na 2002, anyị malitere iji teknụzụ ịgbado ọkụ akpaka ọhụrụ.Ourlọ ọrụ anyị na -agbaso oge niile, na -aga n'ihu na teknụzụ mmepụta, wee buru ụzọ bute ndị ahịa anyị ahụmịhe dị iche.
Arụchaala mpaghara ihe ọkụkụ anyị nke abụọ ma tinye ya n'ọrụ
Na 2004, anyị abụọ osisi ebe e dechara na tinye n'ọrụ.We amụbawo anyị mmepụta akara, mụbara mmepụta na -eje ozi ọzọ ahịa.
Mgbapụta eletriki eletriki mbụ nke ụlọ ọrụ anyị pụtara
Na 2007, ụlọ ọrụ anyị mbụ nnwere onwe ika electric ọgba tum tum wee pụta. Anyị abanyela n'ahịa ọhụrụ ma nwee ebumnuche ọhụrụ. N'afọ ahụ, anyị kpebisiri ike ịnọ n'otu ahịa nke ọgba tum tum eletrik.
Ụlọ nyocha ọhụrụ nke corrosion zụrụ ọtụtụ ngwa maka uru ngwaahịa
Na 2009, ụlọ nyocha ọhụrụ nke corrosion zụrụ ọtụtụ ngwa maka uru ngwaahịa. Njirimara ngwaahịa bụ ndụ azụmaahịa, nke bụ uche anyị na -agbaso. Njikwa mma na -aghọwanye ọkachamara. Ruo taa, anyị agbaala mbọ ka esi eme ka ngwaahịa dị elu karịa.
Companylọ ọrụ anyị sonyere na ihe ngosi ahụ na nke mbụ, na -agbanwe site na ụlọ ọrụ na -emepụta ihe na -emepụta ihe.
Na 2010, ụlọ ọrụ anyị sonyere na ihe ngosi ahụ na nke mbụ, na -agbanwe site na ụlọ ọrụ na -emepụta ihe. N'otu afọ ahụ, ụlọ ọrụ anyị kpọbatara onye ahịa mbụ si mba ọzọ. Azụmaahịa mba ụwa bụ ahịa ụlọ ọrụ ọ bụla ga -abanye. Na -eche ụwa ihu ma bụrụ onye na -ebubata ndị ahịa ala ọzọ, anyị na -anwa ịnye ụwa ngwaahịa kacha mma emere na China.
Mkpokọta mmepụta nke ụlọ ọrụ anyị karịrị otu nde
Na 2011, mkpokọta mmepụta nke ụlọ ọrụ anyị karịrị otu nde. Ahịrị ngwaahịa karịrị 10, ihe karịrị ụdịdị 100. Usoro ịzụ ahịa ijikọ ụwa ọnụ na -apụtawanye nke ọma. Site n'ịghọta ngwaahịa anyị site n'aka ndị ahịa, ahịa anyị na -abawanye na mbara. Ndị mmadụ n'ụwa niile na -amata ngwa ahịa emere na China.
E tinyere mpaghara ụlọ ọrụ nke atọ nke ụlọ ọrụ anyị n'ime anyị
Na 2014, etinyere mpaghara ụlọ ọrụ nke atọ nke ụlọ ọrụ anyị. Ahịrị mmepụta abụọ mbụ enweghịzi ike izute mkpa nke iwu ka ukwuu. Anyị ga -ewusi mmepụta ike, belata oge nnyefe, jeere ndị ahịa ozi nke ọma ma wetara ndị ahịa ọrụ kachasị adaba.
Ụlọ ọrụ anyị ebupụla ihe karịrị narị puku ngwaahịa ya abụọ
Na 2017, ụlọ ọrụ anyị na-ebupụ ihe karịrị narị puku ngwaahịa ya. Anyị emeela ihe dị ịtụnanya, nke niile dabere na njikwa njikwa anyị siri ike na ogo ọrụ dị elu. Ndị ahịa na -enwekwu afọ ojuju na anyị, nke na -eme ka azụmaahịa anyị too nke ukwuu. N'afọ a, olu ịtụ anyị emegogo nke ọma.
Mmepe na imewe nke igwe kwụ otu ebe igwe
Na 2021, ụlọ ọrụ anyị emechala mmepe na imewe nke ọtụtụ igwe kwụ otu ebe batrị lithium, ma nwee ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa na North America na ụfọdụ mba Europe. Anyị anọwo na -ebute ụzọ n'ahịa ọhụrụ, na -achọpụta ohere azụmaahịa ọhụrụ, na -ewetara ụlọ ọrụ anyị nnukwu ahịa, ma na -enyere ndị ahịa anyị aka ijide ahịa na obodo ha.